(၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် COVID-19 ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါ - Yangon Nation News
ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈….အခန်း(၁၁) နှင့်အတူ…..
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်…..အခန်း(၉)… ပုဒ်မ(၃၉၁ မှ ၄၀၃) အထိ…
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုသည့် ပုဒ်မပေါင်း(၁၂) ခုပါရှိပါတယ်။
(င) သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရသော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲများကို ရွေ့ ဆိုင်းခြင်း။
(စ) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင်ဲအညီ လည်းကောင်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊
ဥပဒေ များနှင့်အညီ လည်းကောင်းထုတ်ပြန် ခြင်း။
(ဇ) ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ…..
အခန်း(၁၁)… ကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ…
ပုဒ်မ(၅၀) ကော်မရှင်သည် ——
(က) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ယင်းဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီးသည်အထိ ရွေးကောက်ပွဲကို ….
(ခ) မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် မဲစာရင်းပြုစုရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒမဲ ပေးရန်သော်လည်းကောင်း လုံခြုံမူ အခြေအနေ မရှိလျှင် ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
(ဂ) လွတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင် ပါဝင်သော အချို့ ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အခြေအနေရှိပြီး၊ အချို့ဒေသများ ၌ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းရန် အခြေအနေ မရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အခြေအနေ ရှိသော ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် သော်လည်းကောင်း၊
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိသော ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း မပြုရန်သော်လည်းကောင်း၊
မဲရုံများကို လုံခြုံမူ ရှိသောနေရာများသို့ပြောင်းရွေ့ကျင်းပ ရန်သော်လည်းကောင်း၊
သို့ရာတွင် မဲစာရင်းအရ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး၏( ၅၁ ) ရာခိုင်နှုန်းက ဆန္ဒမဲ ပေးပြီးဖြစ်လျှင်
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ကော်မရှင်က ယူဆလျှင် ယင်းမဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်လုံး၏ရွေးကောက်ပွဲ ကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
အမျိုးသား၊ပြည်သူ့၊ တိုင်း/ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများ……
ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များအရ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးမူ အခြေအနေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသည့်နေ့မှ
(၄၅) ရက်အတွင်း အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရမည်။
ဤသည်များသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တာဝန်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ္မ(၃၉၈) ….. ပုဒ်မ
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်၊ ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးခန့်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ငါးဦးကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင် သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၉၇) ….ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းသည့်အခါ….
(က)…. (၁) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့ စည်း တစ်ရပ်ရပ်အား ယင်းဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်ခွင့်ကို အပ်နှင်းနိုင်သည်။
သို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ၊ ထုတ်ပြန်ခွင့်အားလုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ညီသည့်အပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် သာ တိုက်ရိုက်…သက်ဆိုင်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သမ္မတ၏ အခွင့်အာဏာအောက်မှာ ရှိပါတယ်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၉၈)….
ပြည်ထောင်စု၊တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိဲုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီး အဖွဲ့ ဥပဒေပြုစာရင်းများတွင်ဖော်ပြမထားသော အခြားကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဥပဒေပြုပိုင်ခွင့်အာဏာကို ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်သို့အပ်နှင်းသည်။
ထိုသည်ကို အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၈၆)(က)(ခ) ဖြင့် လွတ်တော်အတွင်း များရာမဲဖြင့်သာဆုံး ဖြတ်ရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်များသည်လည်း အကြားမလပ် အောင်လုံလောက် ခိုင်မာပါတယ်။
လိုအပ်ပါက သမ္မတ ကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်သို့ ကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမှာပါ။
ယခုအခါမှာ အချို့မှပြောနေကြသော —–
အခန်း(၁၁) — အရေးပေါ်ကာလ ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များကို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ချိတ်ဆက် ပြောနေကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။
ပုဒ်မ (၄၁၀) မှ ပုဒ်မ(၄၃၂) အထိပုဒ်မပေါင်း(၃၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။
အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်၏ တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခု၊ပြည်နယ်တစ်ခု၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တစ်ခုခုတွင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသာနာများနှင့် …
နိုင်ငံတော်ကြီး၏အချုပ်အခြာအာဏာ ကို ဆူပူသောင်းကျန်းမူ၊ အကြမ်းဖက်မူနှင့် အဓမ္မနည်းများ ဖြင့် ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မူခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲစေမည့် ၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မူပြိုကွဲစေမည့်သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်လွတ်ဆုံးရူံးစေမည့် အကြောင်းကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှသာ…..
အခန်း (၁၁) ပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ များ၏ အခွင့် အာဏာများကို သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပါပြဌာန်းချက် များကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်လေ ရာဇဝတ်ထုံးလို တရားမလို၊ ရာဇသတ်ကြီးလို မျိုးတရားရုံး တွေမှာ ခုခံ ချေ ပ သလို ရှု မြင် သုံးသပ် လို့မရတာတွေက အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဥပဒေပညာရှင် ရှေ့နေများကို မိမိတို့နိုင်ငံသားများက အားကိုး အားပြု အလေးထားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကို လိုအပ်ပါက နိုင်ငံရေးအမြင် သုံးသပ်ချက်၊ ရှုထောင့်များမှ အချက်အလက်များ ဖြင့်လည်း သုံးသပ်ဘို့သည်လည်းအရေးကြီးလှပေသည်။
ယခု ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း အား ယခင်ကာလရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပမူ လ/ရက် သို့မဟုတ် ရက်အနည်းငယ်၊ လအနည်းငယ် စောခြင်း၊ နောက်ကျ ကျင်းပခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင်…..
သမ္မတဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ညှိနှိုင်းမူဖြင့်…ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ ၏ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း(၁၁) ပါ အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များ နှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါပေ။
ယခုဖြစ်နေသည်မှာ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးခြင်းနှင်ဲ လုံးဝ သက်ဆိုင်မူ မရှိသော ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေဖြစ်ပြီး…
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မိမိတို့နိုင်ငံသည် First Wave အဆင့်မှာသာ တန့်နေပါတယ်။
Second Wave ဆီသို့ မရောက်ရှိစေရန် မိမိတို့ ကြိုးစား အားထုတ်ကြရပါမယ်။
Second Wave မှ Third Wave များဆီသို့ရောက်ရှိစေဘို့သည် အင်မတန်လွယ်ကူ မြန်လွန်းလှပါတယ်၊
တိုင်းပြည်နှင့် တိုင်းသူ ပြည်သားများ၏ အသက်အန္တရာယ် နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမူများသည် ပြောမပြတတ်အောင်များပြားလာနိုင်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် မရော က်စေရန်မှာ မိမိတို့ တစ်ဦးခြင်း၊ တစ်မိသားစုခြင်း၊ တစ်ရပ်ကွက် – တစ်ရွာ – တစ်မြို့ – တစ်တိုင်း – တစ်ပြည်နယ်ခြင်း မှသည် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝှမ်းလုံးသည် သက်ဆိုင် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဒေသ အစိုးရများမှ ထုတ်ပြန်၊ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာကြပါက…..
မိမိတို့နိုင်ငံ သည် First Wave မှာပင် ထိန်းချုပ် နိုင်စေမှာ ဧကန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဤသို့ ဆောင်ရွက် လိုက်နာကြပါက မိမိတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအားလုံး ကပ်ရောဂါဆိုး ကြီအား တွန်းလှန် တိုက်ခိုက် အောင်မြင်နိုင်ကြကာ အရာအားလုံးသည်လည်း…..
ကောင်းမွန်သည့် လမ်းကြောင်းများပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်မှာ.ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။